Babilọn bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta ọhụrụ iji weta ndụ jisiri ike zuru ụwa ọnụ ihe ruru 350k, gụnyere ndụ nlekọta nlekọta bara uru 250k
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Babilọn bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta ọhụrụ iji weta ndụ jisiri ike zuru ụwa ọnụ ihe ruru 350k, gụnyere ndụ nlekọta nlekọta bara uru 250k
Babilọn taa depụtara ike ya na-aga n'ihu, na-ekwuputa ndụ c.135k ọzọ ga-enweta ohere nlekọta nlekọta dabere na US na UK site na mgbasawanye ya na steeti US ndị ọzọ, Georgia na Mississippi, na mmụba ọzọ gafee California. Nke a pụtara na site na ngwakọta nke usoro nlekọta dabere na ọnụ ahịa ya, Babilọn 360 na ọrụ ya na nlekọta nke mbụ, Babịlọn ga na-achị c. 350k na -ebi n'ụwa niile, gụnyere 105k NHS GP at Hand lives, site na mbido 2022. Babilọn kwughachiri ntuziaka mbata ego 2021 na 2022 na Septemba 15, 2021.
Mgbasawanye nke ọrụ anyị ga -enyere Babịlọn aka imekwu ebumnuche anyị iru obodo ebe nnweta na ọnụ ahịa bụ ihe mgbochi, iji mee ka ịha nhatanha ahụike bụrụ ihe a na -ahụkarị, ”onye guzobere Babilọn & Onye isi ala Ali Parsa kwuru. "Mmụba anyị na nlekọta dabere na uru bara uru na-egosipụtakwa uru nhazi nke ụdịdị dijitalụ nke mbụ, nke na-aga n'ihu atụmatụ, niile ka na-enwe nlekọta ahụike dị elu."
Babilọn ga-abawanye ọnụ ọgụgụ ndị America na-eje ozi site na mmemme nlekọta dabere na ọnụ ahịa ya yana mgbakwunye 63k na Georgia na Mississippi, dị ka ụbọchị nkwekọrịta. Nke a ga -agbakwunyere site na ndụ 17k na California na mbido 2022. Nke a ga -apụta na ndị ọrịa Medicaid na Medicare ga -agafe oge enyere ohere ịnweta ndị dọkịta na ndị nọọsụ nlekọta ahụike 24/7, ikike ị nweta nghọta na nkwado nkeonwe, na n'ozuzu njedebe na nlekọta ikpeazụ, na ebumnuche nke na -eduga na nsonaazụ ka mma yana ọnụ ala karịa ka oge na -aga.
Mgbasawanye US na nso nso a na -eme ka uto Babilọn zuru ụwa ọnụ, yana ihe karịrị 55K agbakwunyere na nso nso a na UK site na mmekorita ya na Royal Wolverhampton NHS Trust n'elu ndụ 105k site na NHS GP Practice ya, Babilọn GP dị nso. Mgbasawanye nke Babilọn 360 na-eme ka nzukọ ọzọ guzosie ike dị ka onye ndu na dijitalụ-nke mbụ, nlekọta dabere na uru, kwekọrọ na ebumnuche ntọala ụlọ ọrụ ahụ iji nye onye ọ bụla nọ n'ụwa nlekọta ahụike dị ọnụ ala. Babilọn na-arụzigharị ụzọ e si ebuga nlekọta ahụike na ihe nlereanya dị oke egwu nke na-ezube ichekwa ahụike ndị mmadụ, na-apụ na ụdị ụgwọ ọrụ ugbu a nke na-elekwasị anya n'ọrịa na nsogbu.
Ihe dị ịrịba ama nke ndụ 350K kpuchiri gburugburu ụwa na-abịa n'oge mgbanwe Babilọn, yana mkpesa nrite H1 2021 na-ekpughe mmụba ego na-enweta kwa afọ 472%, yana njikọta $ 4.2B SPAC na Alkuri Global Acquisition Corp. nke a ga-emechi n'oge adịghị anya. . Dị ka ụlọ ọrụ na-ere ere n'ihu ọha, Babilọn na-atụ anya ịbụ onye a ga-edobe ka ọ dabere na traction ọ nwetagoro ma na-aga n'ihu na-aga n'ihu site n'ịrụ ọrụ ngwa ngwa.